IGeo-Engineering neTwinGeo Magazine - Uhlelo Lwesibili - IGeofumadas
Ngo-Okthoba, 2019 Geospatial - GIS, Ubunginiyela, egeomates yami
Besiphila umzuzu othakazelisayo wokuguqulwa kwedijithali. Kuzo zonke iziyalo, izinguquko zidlulela ngaphezu kokulahlwa okulula kwephepha ukwenza izinqubo zibe lula ekufuneni ukusebenza kahle nemiphumela engcono. Umkhakha wezokwakha uyisibonelo esithandekayo sokuthi, siqhutshwa izikhuthazi ezizayo ezizayo ezifana ne-Intanethi Yezinto kanye namadolobha edijithali, sisengcupheni yokuzivuselela njengoba indlela yokuvuthwa ye-BIM ikuvumela.
Ukubekwa esimweni kwe-BIM ezingeni lesi-3 kuyahambisana kakhulu nomqondo wamaDijithali amawele, ukuthi kube nzima kangako ezinkampanini ezinjengeMicrosoft ukuthola indawo enenzuzo emakethe ngaphambili ebibonakala ingonjiniyela nabakhi bezakhiwo kuphela. Ngokwami, ngivela esizukulwaneni esabona ukuthi i-CAD ifika njengesisombululo somdwebo ojwayelekile nokuthi kwakunzima kimi ukwamukela ukumodeliswa kwe-3D ngoba ekuqaleni imidwebo yesandla sami yayibonakala ikhanga kakhulu kunokuhumusha okuyisidina. Futhi yize sikholelwa ukuthi esikwenzayo manje ngeStructural Robot, i-AecoSIM noma iSynchro iyona engcono kunazo zonke, uma sibheka emuva eminyakeni engama-25 eyedlule asenzi lutho ngaphandle kokungikholisa ukuthi sisendaweni efanayo yokujika yokuphathwa kokuqukethwe okuhlangene kakhulu.
... ngendlela yobunjiniyela.
Njengamanje nje ukuthi imigomo ye-Gemini ibukeka sengathi idonsela umugqa ohlukile kunendlela yamazinga wokuvuthwa kwe-BIM, iphinda ivuselele umqondo omdala obizwa ngeDijithali Twins lapho izinkampani ezinkulu embonini zithuthukisela inguquko yesine yezimboni; kanye nenhloso yokuqhubeka nengqikithi yokuvela kobunjiniyela be-Geo-engineering, njengendaba esembolekweni sinqume i-BIM ekuqondeni nasekubalulekeni kwayo.
Sigcwalisa uhlelo ngezibonelo zezinto ezintsha ku-spectrum se-Geo-engineering ngabanikezeli besoftware nabahlinzeka ngezinsizakalo. Izifundo eziyizibonelo ezilandelayo nezihloko ziyavela:
Ukuphathwa kwezindawo zokuqonda, ipaki yesayensi yaseHong Kong isebenzisa umqondo we-Digital Twins.
Ukuhlola okuzenzakalelayo kwemigwaqo kanye nezingqalasizinda eziqondile kusetshenziswa iDrone Harmony.
UChristine Byrn usitshela ngeDigitally Advanced City maqondana nemininingwane ethembekile lapho futhi lapho kudingeka khona.
I-LandViewer, nemisebenzi yayo yokuthola izinguquko kusuka kusiphequluli.
Ngokuqondene nezingxoxo, lo magazini ubandakanya ukusebenzisana nabadali beSynchro, i-UAVOS kanye neyokuqala kaJosé Luis del Moral ngephrojekthi yakhe ye-Prometheus yobuhlakani bokufakelwa esetshenziswa kuhlaka lwezomthetho.
... ngendlela ye-GEO.
Ngakolunye uhlangothi, ukumbona ephuma ohlelweni lwakhe olujwayelekile lokuhlola, futhi ukucabanga ngokubhekana nenselelo yokuhlanganisa indinganiso ye-LADM ne-InfraXML kungaphezu kokwenelisa. Ukufakwa esimweni ekugcineni sekungene njengomucu ojwayelekile phakathi komkhakha ozimele nomthombo ovulekile, abanye njengabaphikisi, abanye njengokuyeka ukuthi izinto zizokwenzeka ngabo noma ngaphandle kwabo. Ekugcineni inzuzo ingukuhlangenwe nakho okuphumelelayo; Ngakho-ke, emkhakheni we-geospatial kanye nasekuqhubekeni nomugqa weRegistry Registry, sifake icala lokuphumelela ekuphathweni komhlaba.
Ngaphezu kwalokho, umagazini ofakelwe amavidiyo ashumekiwe nezixhumanisi ezisebenzayo, uqukethe izindaba ezivela ku-Airbus (COD3D), i-Esri ngokubambisana kwayo ne-Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 kanye ne-M.App) ne-Trimble nezinsizakalo zayo zeCatalyst.
Ukugcina ukuzibophezela kwethu ukukunikeza izindaba ezithokozisayo ku-Geo-engineering spectrum, siyajabula ukuletha kuwe uhlelo lwesibili lwamagazini we-Geo-Engineering ngeSpain neTwinGeo yokukhuluma isiNgisi.
Funda iTwinGeo - ngesiNgisi
Funda i-Geo-Engineering - NgeSpanishi
Thumela Previous«Langaphambilini Omunye unyaka, enye ingqopha-mlando, okunye okuhlangenwe nakho okungajwayelekile… Lokho bekuyi-YII2019 kimi!
Post Next Ingqungquthela ye-15th International gvSIG - usuku 1Okulandelayo »